"He! Ianareo rehetra izay mangetaheta, mankanesa amin’ny rano! Ary ianareo izay tsy manam-bola, avia, mividia, ka homàna! Eny, avia, mividiana divay sy ronono, nefa tsy amim-bola, na amin-karena." Isaia 55:1
"Tsy zavatra mety ho simba, tahaka ny volafotsy sy ny volamena, no nanavotana anareo… Fa ny rà soan’I Kristy." 1 Petera 1:18-19
Hoy ity olo-malaza iray: “Ny vola dia azo ividianana zavatra maro ety ivelany, fa tsy ny tena izy. Ahafahana mividy sakafo, fa tsy fahazotoan-komana; ahafahana mividy fanafody, fa tsy fahasalamana; ahafantarana olona, fa tsy ahazoana namanao; ahiotana androm-pifaliana, fa tsy fiadanana na fahasambarana.”
Ao amin’ny fiarahamonina misy antsika tokoa mantsy dia saika tsy misy na inona na inona azo tsy amim-bola, ary saika azo amim-bola avokoa ny zavatra rehetra, hatramin’ny fanatanterahana ireo fanirian-dratsy rehetra, hatramin’ny fanatanterahana ireo fanirian-dratsy faran’izay ambany. Voatombana avokoa ny zavatra rehetra, ary na ny ain’olona aza dia efa voatomban’ny tranom-piantohana.
Na izany aza nefa dia tsy misy afa-tsy fananana mihelina ihany no mety azo, ho takalon’ny vola. Afaka manao fiantohana ny aina isika, saingy tsy afa-manao na inona na inona, hialana amin’ny tahotra ny fahafatesana; afaka mividy fanafody fampitniana, fa tsy mahavidy fiadanam-po; afaka mividy toerana eny an-tanim-pasana, fa tsy mahavidy toerana any an-danitra.
Hoy ny Baiboly: “Ny harenareo efa samba” (Jakoba 5:2), ny tena harena tokoa mantsy, ny hany maharitra dia tsy voavidim-bola. Nefa azon’ny tsirairay; raisina maimaim-poana. Ny famonjena ny fanahy, ny famelan-keloka, ny fihavanana amin’Andriamanitra, ny fiainana mandrakizay, dia samy atolotra an’izay maniry izany. Tsy mil any volantsika Andriamanitra, Tompon’ny lanitra sy ny tany. Raha miaiky ny fahatranntsika eo anatrehany sy ny hetaheta lalin’ny fanahiantsika anjakan’ny ota isika, dia vonona Izy hanome izay ilaintsika, ary hanome be dia be. Ao amin’I Jesosy no misy hamenoana izay rehetra banga ao amintsika; omeny ny fiainana izay mandray Azy. Izany dia fanomezana lavorary avy amin’ilay Andriamanitra tia antsika.
Ilay voa tsara afafy